DAWN wuxuu furan yahay kuna shaqeeyaa saacadaha shaqada ee caadiga ah. Waxaan sii wadaynaa daryeelka bukaannadeena. Hadaad balan ku leedahay DAWN, fadlan qorshee inaad ilaaliso ballantaAN INTA AADAN ka maqlin DAWN Clinic ama aad la kulanto astaamo sida qandho, qufac, ama neefta oo ku qabata.
Haddii aad tahay bukaan ay ku dhacayaan astaamahan, fadlan soo wac kaayaga Khadka kala soocida kalkaalisada COVID-19 ee 303-800-9677 dheeraad ah 504 .
Hoos waxaa si joogta ah loo weydiiyaa su'aalaha la xiriira COVID-19 maadaama ay la xiriirto bukaankeenna iyo bulshada. Waxaan cusbooneysiineynaa boggan markii macluumaad dheeri ah la helayo.
Ma inaan ballan yeeshaa?, mise waxaan ku soo geli karaa socod ahaan bukaanka?
Hadda kuma sii soconayno socodka bukaan socodka. Qofkasta oo raba in la arko, oo ay ku jiraan bukaanno cusub, waa inuu wacaa 303-800-9677 dheeraad ah 504 ballan.
Ma keeni karaa carruur iyo xubno qoys / daryeel bixiye ballamadayda(s)?
Fadlan ka fogow inaad carruurta iyo xubnaha qoyska / daryeelayaasha u keento ballantaada.
Maxaan sameeyaa haddii aan qabo calaamado hargab ama ifilo?
Haddii ay tahay inaad aragto kooxdaada oo aad leedahay astaamo firfircoon, sida qandho, qufac, ama neefta oo ku qabata, ama calaamadaha kale ee neefsashada oo ay ku jiraan ciriiriga ama sanka oo dareera, fadlan ka soo wac khadkayaga kala-soocidda kalkaalisooyinka ee COVID-19 303-800-9677 dheeraad ah 504 ballantaada ka hor. Kalkaalisada caafimaad ayaa ku siin doonta hagitaan ku saabsan haddii aad rugta caafimaad imaanaysid ama aad sugtid inta ay calaamadahaadu kaa baxayaan.
Bukaannada ma laga baaraa astaamaha neefsashada?
Haa, bukaanada oo dhan waxaa laga baarayaa astaamaha cudurka neefsashada irida rugta caafimaadka.
Haddii aan xirto maaskaro rugta caafimaadka?
Waa inaad ku xidhataa maaskaro rugta caafimaadka keliya haddii ay shaqaalaha kugu amraan inaad sidaas sameyso. Markaad rugta caafimaadka ka soo gasho albaabka hore, waxaa lagaa baari doonaa astaamaha neefsashada. Haddii shaqaaluhu ogaadaan inaad leedahay calaamado, waxay ku siin doonaan maaskar waxayna kuu sheegi doonaan sida saxda ah ee loo xirto. Haddii si sax ah loo xidho, maaskarada ayaa kaa caawin kara yareynta faafidda fayrasyada neef-mareenka iyo bakteeriyada.
Haddii xubnaha qoyskeyga / daryeel-bixiyeyaasha iyo aniga aanan qabin qandho ama astaamo xagga neefsashada ah, ma inaan indho-shareer ku xirno dadweynaha?
Maya, haddii aadan lahayn astaamo, looma baahna in la xirto maaskaro, sida laga soo xigtay Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada. Maaskarada waxaa loogu talagalay inay ka hortagto bukaanada ay ka muuqato astaamaha inay cudurka ugu fidiyaan dadka kale. Waxaa fiican inaad guriga iska joogto si looga ilaaliyo inuu cudurkaaga ugu faafiyo dadka kale.
Ma tahay baaritaanka DAWN bukaanada loogu talagalay COVID-19?
Kaliya Waaxda Caafimaadka Bulshada iyo Deegaanka ee Colorado (CDPHE) ayaa tijaabineysa bukaanada. Haddii aad buuxiso shuruudaha baaritaanka kooxdaada caafimaad waxay la shaqeyn doontaa CDPHE si loo diyaariyo tan. Tijaabada laguma dhameystiri karo codsi bukaan ah.
Mudo intee le'eg ayay ku qaadanaysaa in natiijooyinku soo noqdaan?
Guud ahaan, waxaan dib ugu heli karnaa natiijooyinka baaritaanka COVID-19 24 si ay u 48 saacadood.
Ma jiraan wax aan sameyn karo oo aan isku ilaaliyo, qoyskeyga iyo asxaabteyda oo nabad qaba?
Tallaabooyinka ugu muhiimsan ee la qaado waxay la mid yihiin xilli kasta oo qabow iyo hargab:
Joog guriga markii aad jiran tahay. · Practice good hand hygiene and cough and sneeze etiquette by sneezing or coughing into your elbow.
Ka fogow xiriir dhow oo aad la leedahay dadka jiran.
Iska jir taabashada indhahaaga, sanka, iyo afka.
Nadiifi oo jeermiga ku nadiifi walxaha iyo dusha sare ee la taabto adoo isticmaalaya qalabka guryaha lagu buufiyo ama masax.
Qorshee sida aad u daryeeli doonto xubnaha qoyskaaga ee jiran. U samee qorsheyaal daryeelka carruurta haddii aad jiran tahay ama haddii ilmahaagu jiran yahay. Guriga ku hay heerkulbeeg si aad isaga hubin karto qandhada haddii adiga ama qof aad jeceshahay aad xanuun dareento.